Ndị na-emepụta ngwaahịa - Ndị na-eweta ngwaahịa China & Ụlọ ọrụ
ọkọlọtọ F (Anya mmiri)
Udi akwa anya mmiri nke nwere nnukwu mbara elu na-adọrọ anya ma dịkwa mma nke ọma maka ịrụ ọrụ na ọnọdụ ikuku. A na-ekwu na nke mbụ sitere na South Africa mana anyị mebere ya na China site na imepụta injinia ọkachamara wee mee ọkọlọtọ ọhụrụ na ụlọ ọrụ a maka ụwa.
S ọkọlọtọ (Nku)
S ọkọlọtọ, nke a na-akpọkwa ọkọlọtọ nku ma ọ bụ ọkọlọtọ ụgbọ mmiri. Ọnụ ego dị oke ọnụ pụtara ịdọta uche ma n'èzí ma n'ime ụlọ maka azụmahịa, mmemme ma ọ bụ ihe ngosi ahia ọ bụla. Ma enwere ike iji ya ọzọ yana ezigbo enyi na enyi, ị nwere ike ịtọlite ​​​​n'ime ihe nkeji.
Ọkọlọtọ H nke a na-akpọkwa ọkọlọtọ rectangle, ọkọlọtọ ewepụghị ma ọ bụ ọkọlọtọ osimiri, ọ nwere ike mee ka ọkọlọtọ gosipụta ọmarịcha oge ọ bụla. Ebe a na-ebi akwụkwọ ka ukwuu dabara nke ọma maka ozi ahịa na-enwe mmetụta dị elu na akara ngosi.
4 n'ime 1 pole system bụ ngwaahịa patent anyị ma malite nke WZRODS zuru ụwa ọnụ na 2008, nke nwere ike ịkwado ụdị ọkọlọtọ 4 dị iche iche (ọkọlọtọ nku, ọkọlọtọ anya mmiri, ọkọlọtọ shark fin na ọkọlọtọ rectangle) na sistemụ ọkọlọtọ 1. Ọ dị mfe ịgbanwe ma jikwaa ngwaahịa gị iji zute usoro ngwa ngwa nke ndị ahịa, belata ngwa ahịa na ohere ngwaahịa gị. Otu n'ime ngwaahịa anyị kacha ewu ewu.
Sistemụ ọkọlọtọ ukwu
Nnukwu ogwe osisi, nnukwu ọkọlọtọ ọkọlọtọ ma ọ bụ ọkọlọtọ Windancer na ahịa, na-abụkarị ọkọlọtọ rectangle karịrị akarị nke nwere mkpanaka telescopic aluminum ruo 5.4m dị elu. Sistemụ ọkọlọtọ Giant pụrụ iche dị iche na ndị ọzọ, ụdị ọkọlọtọ 3 dị iche iche (anya mmiri / nku / rectangle) na sistemụ osisi 1 nwere elu ruo 7m, ntọala 4 dị iche iche dị. Na-enye gị ihe ngwọta nke mmetụta dị elu maka ihe ngosi ahịa gị ma ọ bụ ihe ngosi ma jide n'aka na a ga-ahụ ozi gị n'elu igwe mmadụ.
Ọkọlọtọ anya mmiri/nbụ mmefu ego
Sistemụ Budge Pole bụ usoro pụrụ iche maka mmemme mmefu ego nke ị nwere ike ịnwe ụdị ọkọlọtọ 2 dị iche iche yana ọnụ ala mana otu ọrụ. Ọ bụ nhọrọ magburu onwe ya iji n'okporo ámá dị elu, nke ị nwere ike igosi ya ozugbo n'ihu ụlọ ahịa gị.
Enwere ike itinye ogwe ọkọlọtọ nke etinyere mgbidi na mgbidi ma ọ bụ n'elu ụlọ wee gosipụta ọkọlọtọ gị nke ọma, zuru oke maka ụlọ ma ọ bụ azụmahịa ọ bụla.
ọkọlọtọ Shark fin na-adọrọ nnọọ mmasị n'ihi ọdịdị ọkọlọtọ ya pụrụ iche nke dị iche na ọkọlọtọ na-efe efe na ọkọlọtọ nku. Ụzọ dị mfe ma dị ọnụ ahịa iji kwalite, hụ na ozi gị na-enweta nlebara anya karịa.
Ọkọlọtọ T bụ otu n'ime ọkọlọtọ ụdị pụrụ iche, nke a makwaara dị ka ọkọlọtọ sharkfin. Ha nwere akụkụ elu gbagọrọ agbagọ na ọ fọrọ nke nta ka ha nwee ọdịdị "anya mmiri". Emebere ọkọlọtọ Sharkfin maka ime ụlọ na n'èzí ika dị ka ụbọchị gọọlfụ, ihe ngosi ụgbọ ala wdg. Ogwe osisi sitere na ihe mejupụtara carbon nwere ike ikwe gị ogologo oge iji oge.
123456 Ọzọ > >> Peeji nke 1/9